I-Green Bor Guesthouse - I-Airbnb
I-Green Bor Guesthouse
Indlu engasemva yonke sinombuki zindwendwe onguДмитрий
Kule paradesi, ungaphumla kwindawo ephithizelayo yesixeko, wonwabele indalo nokuthi cwaka, apho unokuva umoya utyibilika kumagqabi emithi.
Ukusuka efestileni yendlu ungabona iVolga, kwaye kwiimitha eziyi-100 unxweme olunesanti lokuqubha kunye nomtsalane omkhulu wesixeko - iKonakovsky Bor. Inemizila yokunyuka intaba, i-gazebos, intwasahlobo enamanzi ayintloko, kwaye yindawo entle yokwenza izinto zangaphandle: ukujoga, ukuhamba ngebhayisekile, kunye nokutyibilika ekhephini. Kukho ukuqaliswa kwezikhephe nezikhephe ezinento yonke.
Indlu yeendwendwe ikwindawo yabucala kwihlathi lepine, apho imithi entle isoloko iluhlaza ibe intle ngamehlo.
Indawo yethu ilungele usuku lokuthandana, kunye neentsapho kunye nabantu abathanda izinto ezingaqhelekanga. Le ndlu inazo zonke izinto ozidingayo ukuze uhlale kamnandi uze uhlaziye. Egadini, ungaqhotsa izitshixo uze wonwabele ukutshona kwelanga ngokuhlwa ngaselunxwemeni loMlambo iVolga.
4.90 · Izimvo eziyi-11
Indawo yam ijonge iVolga River, apho ivuleke khona kangangeekhilomitha ezimbini. Kukho iindlela ezininzi zokunyuka intaba kwihlathi lepine, ngoko ziqhelanise. Ngokuqinisekileyo ufanele uhambe ngesikhephe usiya kwenye ibhanki, ukuba kukho iibhayisekile okanye ii-skis, kuxhomekeka kwixesha lonyaka, qiniseka ukuba uhamba nawe, kuba indawo yam yenzelwe izinto ezinjalo zangaphandle))
Umbuki zindwendwe ngu- Дмитрий
Ndiza kukwazi ukunceda abahambi ebudeni bohambo.